unogona kushanda kana kuve neyako disensary kana kukura uine felony?
Felonies & Cannabis Mabasa
Iwe Unoda Kuti Upinde Mukambani yeCannabis?
Kana iwe wakasungwa ukava a felon panguva yekurambidzwa kwe cannabis, zvino chinyorwa ichi ndeche yako. Isu tinofukidza maitiro matsva mukuvandudza mutemo, asi tarisa kuIllinois nekuti yaive nyika yekutanga kugadzirisa pamutemo cannabis uye yaida kuti mimwe mirawu yezvemagariro evanhu ivakwe mumutemo kuti igadzirise kukuvadza kwakashanyira vanhu vakaita sewe. Havasi vese felonies vakafanana, uye Illinois cannabis mutemo haivatore vakadaro. Kana iwe uine rekodhi yemhosva, mimwe mitemo inoshanda kunze kwemutemo we cannabis kuti uone kana iwe wagadziriswazve uye ungakodzera kubata rezinesi re cannabis.
Illinois Ine 98% Felon Kugamuchirwa Mwero wezinesi
Illinois dhipatimendi rezvemari uye nehunyanzvi remitemo yakaisa pfungwa inotyisa manhamba - 98% yevanonyorera rezinesi HAVANZVIRE pasi nekuti vaimbove vaguta. Testamendi kuIllinois kuyedza kunyatsobatsira avo vakashanda nguva yavo kuti vadzoserwe muvashandi.
Verenga iyo Yepepanhau Rinoburitsa nezve chete 2% yeVanyoreri inorambwa nekuda kwekufambiswa kwapera HERE.
Ko Felony Inodzivirira Yako Cannabis License script
Hei, ndiri Tom - nditsvage na googling cannabis Gweta ndobva ndacheya webhusaiti yangu Cannabis Viwanda Gweta. com kwaunogona kuwana ese ese ese anobatsira cannabis indasitiri info - seiyi yakakosha mubvunzo. Can a felon anogona kuwana rezinesi re cannabis mu Illinois. Ichi chiitiko chakaomesesa uye chakaomarara - asi kana uchida kunyorera & chenga pamwe neni kusvika kumagumo, ipapo uchaziva kwete zvese nezvenyaya iyi - asiwo chakavanzika chehupenyu kuvapo uye zvese.
Tiri kuzopindura izvozvo, asi fanika iyi vhidhiyo kuti utore post nezve cannabis pamutemo nhau dzatinoshambadzira vhiki rega rega kukuchengeta pamusoro peiyo cannabis kunyoreswa kurudzi uye mune yako mamiriro. Ingo nyorera izvozvi kuti uite mumutemo federal.
Saka kana iwe uine felony asi uchida kupinda muindasitiri ye cannabis, unogona? Zvinoenderana nedunhu rako, asi isu tichatarisa kuIllinois nhasi - izvo nekuda kweruramisiro yeruzhinji sekubatsira vanhu vanokwanisa kudzoka muindasitiri iyo ingave yakavatorera makore ehupenyu hwavo, mhuri dzavo uye marudzi ese ehondo pamuri. nekuti isu takarambidza ruva iri - zvakanaka, ngatimbambei mumutemo izvozvi.
Kutanga, ngatiyeukei kuti poindi yemutemo ndeyekugadzirisa matambudziko ehondo yezvinodhaka, uine icho mupfungwa mupfungwa mutemo weI Illinois unopa zvakananga kuti kana chero munhu achinge atariswa kumashure kweye mapurisa ehurumende - kana dhipatimendi rekuburitsa rinoongorora kumashure izvi - isu tinotendeukira kuChinyorwa 5 chemutemo Illinois
Chinyorwa 5 chinotaura nezveChiremera cheHurumende kubata nemvumo yemabhizinesi e cannabis. Kunyanya kurimwa kwechirimwa ichi kunoenda kuDhipatimendi rekurima, nepo ma distensaries achifanira kubata neDhipatimendi reMari nehunyanzvi Mutemo.
Uye izvo zvinotisvitsa kumutemo mutsva, iyo Civil Admin Code yeI Illinois kudhipatimendi reunyanzvi mutemo - ndizvozvo, apo pawanga uchifunga kuti cannabis yaitonhorera, isu tine mirau yekukuchidzira iwe - chaizvo 3. Zvikamu 2105-131, 2105- 135, uye 2105-205.
Kubva pane izvi zvitatu zvikamu zvauri kuenda kudzidza kuti State of Illinois ane tsika tsika yakavakirwa mariri - saka usafunge iwe unogona kutenga uye kuvimbisa nzira yako muchinesi kana mutambo mutambo, asi zvakare inobvumidza kune vanhu vane tsotsi. kumashure kuti utsanangure chikonzero nei - uye nekupa zvikonzero nezvayo uye nemashandiro avakaita nzira dzavo. Ngatitangei kutendeukira kuchikamu 3 - cheI Illinois 'Civ Ad code:
Chaizvoizvo, nhoroondo yako yemashure inofanirwa kutaridzwa kuburikidza nemeso ekugadzirisa mhosva yako. Izvo hazvina kukwana kuti zvikuvharire zvachose kubva kuindasitiri. Kana iwe wakawanikwa uine mhosva, vachatarisa panguva kubva, kana iri iyo nzira yekusazvibata - uye zvisere zvisere zvinoremedza zvinhu - zvinosanganisira zera, rakabudirira kupera mutongo. Uchapupu hwekugadzirisa uye zvimwe zvinoremedza zvinhu.
Saka taura nyaya yako yekubudirira nezvekuti nei iwe uri musarudzo wakanaka kunyangwe nhoroondo yako yematsotsi - hadzisi mhosva dzose dzakaenzana, pane musiyano pakati pemhosva ine chisimba uye mhosva yezvinodhaka. Nei uri munhu akanaka? Izvo zvakakosha - unoziva nei?
Iko kwetsika clause yakavakwa mumutemo we cannabis mu Illinois - ndizvo izvo chikamu 135 zvese zviri pamusoro - asi sezviri pachena chete kana iwe uine mhosva yemhosva kubva pakuverenga kwangu peji 22 yemutemo mutsva we cannabis - kana iwe usina kubatwa saka tsika yetsika. haifanire kunyorera, asi ini ndichiri kuudza vatengi vangu kuti vave vakanaka, iko kurerwa kwandakaitwa uye kudzidziswa kuchikoro.
Saka chii kana iwe ukanyimwa rezinesi nekuda kwemhosva yako yapfuura, ipapo chikamu 205 chinobuda muchiitiko - ona vanofanirwa kushambadza kana vakatora chero chiito chekuraira - sekureva taura pasi pechikamu 6 icho chinoti nhamba yevanonyorera nekuda kwemhosva kutendiswa.
Saka ipapo unazvo. Iwe unogona kuwana rezinesi kana uine tsotsi yakapfuura - asi iwe unofanirwa kutsanangura kuti nei zvakaitika uye sei iwe ukava munhu ari nani ane tsika yakanaka semugariro wechikwereti chawakabhadhara munharaunda.
Uye nekutenda kunamatira nesu kuburikidza nekutsvagurudza kwacho - uye yeuka kunyorera kuti uwane zviziviso zvedu zve cannabis zviri pamutemo vhiki imwe neimwe - kwaunogona kuwana zvese zvinogadziridzwa kusvikira zvave pamutemo nyika yose. Tozoonana.
Kurapa kweFelons pasi peCannabis Mutemo kazhinji kunodzokera kune iyo Chiremera Chinyorwa chemutemo.
mu Illinois Chinyorwa 5 cheCannabis Mutemo
Dhipatimendi reAg Scores Craft Grows
Dhipatimendi reMari uye Professional Regulation inovhara Illinois Cannabis Dispensaries.
Kuziva kwangu kuita sei kunoita rangu rezinesi re cannabis?
Yako felony inogona kukanganisa yako ye cannabis rezinesi yekushambadzira nekuti iyo States inoda kuona kuti hapana cannabis inoshayikwa, kana mari yayo. Illinois ine zvikamu zvishoma zvinoshanda kana iwe uine felony - asi haina kukurumidza kukukanganisa.
mhosva yapfuura yemhosva
Zvikumbiro zveCannabis neCriminal Convictions
funga zvinhu zvinodzikisira
Nyika inofanirwa "icha" kutarisa zvinhu zvekugadzirisa
8 chaiyo zvinhu kuti uone kutonga kutonga kwako zvakapfuura
hukama zvakananga nemhosva
Makore mashanu kubvira
zera yenguva yekutendiswa
kupedzwa kwakabudirira kwemutsara
chiratidzo chechimanje chiripo
zvimwe zvinoremedza zvinhu
Tsika Clause Yakavakirwa maFelons neCannabis License
Inoita seinoshanda chete kana iwe uine mhosva - saka hapana hutsika hunodiwa uine hwakachena hweshure ??
zvinokanganisa hutano hweveruzhinji
kuda hunhu hwakanaka mumarezinesi
kuda kuvimba neruzhinji
Kubuditswa kweDenial Kwakarongedzwa neCannabis Felons muIllinois
Ona chikamu 6 chechinyorwa chekuburitsa kana uine kuramba kubva pakupara mhosva.